Manelingelina Ny Fahazotoana Politika An-tserasera Ny Lalam-Pifidianana · Global Voices teny Malagasy
Manelingelina Ny Fahazotoana Politika An-tserasera Ny Lalam-Pifidianana	Voadika ny 16 Desambra 2012 21:53 GMT
Zarao: Raha mianoka tanteraka ny fahalalahana amin'ny aterineto ny Japoney, dia miova kely izany toe-draharaha izany amin'ny fotoam-pifidianana. Ny Lalam-pifidianam-panjakana ao amin'ny firenena no mandrara ny ny kandidà ara-politika tsy hamoaka tahirin-kevitra na sary sy mandrara ny olo-tsotra hanohana olo-malaza ara-politika – izany hoe raha ampiharina ny lalàna dia mihatra amin'ny famahanam-bilaogy, fisiahana ary hatramin'ny fanavaozana sata ao amin'ny Facebook aza.
Namoaka fanambarana ofisialy ny Ameba, iray amin'ny mpanome tolotra bilaogy malaza indrindra ao Japana, tamin'ny fampahatsiahivana amin'ny bilaogera ao aminy tsy hamoaka lahatsoratra na hafatra mety hampisy fifandroritana amin'ny Lalam-pifidianam-panjakana.
Toy izao ny torolalana[ja] notsongaina tao amin'ny Ameba,
Raràn'ny Torolalan'ny Ameba ny
(3) [lahatsoratra bilaogy] manohitra ny etika sosialy sy ny lalàna
⑤ Fanaovana fanentanana mialoha ny fotoam-pifidianana, fanentanana mandritra ny ffifidianana na fanao mitovitovy amin'izany ka mampisy fifandroritana amin'ny Lalàm-pifidianam-panjakana
Araka ny voalazan'ny lahatsoratra, voarara ohatra ny:
mampakatra kabary ataon'ny kandidà eny an'arabe
mampakatra ny hevitry ny kandidà ara-politika efa nandeha fandaharana
manandratra kandidà na antoko sy mandrisika ny olona hifidy ilay kandidà
Tsy ny torolalan'ny Ameba fa ny lalàn'ny tany mihitsy no mandrara ny fanaovana ireo zavatra ireo. Maneho ny heviny amin'ilay lahatsoratra [ja] ny mpisera ny Ameba:
Lasa be ahiahy ny olona mandritra ny fifidianana. Raha midera antoko iray na kandidà iray ianao dia azo adika fa mampifidy izany antoko/kandidà izany. Etsy ankilany, raha mitsikera olona iray, mety holazaina fa fanaratsiana mety mitarika ny fanakiviana ny olona tsy hifidy. Angamba tokony hangina sy hitazatazana isika mandra-pahatapitry ny fifidianana.
Izany hoe ny dikan'izany dia tsy tokony hiteny na inona na inona momba ny fifidianana aho ao amin'ny bilaogy atolotry ny Ameba. Angamba ny hevitra tena mety mba tsy ho sahirana rehefa any aoriana any.
Miroborobo ny dokambarotra politika
Raha voarara amin'ny famoahana tahirin-kevitra sy sary amin'ny aterineto ny kandidà sy ny mpifidy, miroborobo kosa ny dokambarotra politika, indraindray aza tonga hatramin'ny fifanakaikezana tsy ampoizina tahaka ny pikantsary etsy ambany:
Pikantsarin'ny Twilog-n'ny mpitarika ny Antokon'ny Fanavaozana an'i Japana Toru Hashimoto, izay ahitana ny dokambarotry ny antoko mifaninana aminy eo ankavanana.
Tsara ihany koa raha jerena ny dokambarotry ny Antokon'ny Fanavaozana an'i Japana JRP [ja] mialoha ny ijerena lahatsary ao amin'ny Youtube. Ny dokambarotry ny Antoko Komonista Japana samy hita ao amin'ny Hatena [ja] sy ao amin'ny Twitter, ary misy doka hafa avy amin'ny Antoko Demokraty Liberaly [LDP] sy ny Antoko Demokratin'i Japana hita any amin'ny bilaogy sy habaka samihafa amin'ny alalan'ny tolotra dokambarotr'i Google.
[Fanamarihana: Mety hiseho noho ny toerana misy anao, ny web cache, ary miankina amin'ny dokambarotry ny orinasa mpampiserasera ny dokambarotra.]
Sahotaka ao amin'ny Twitter
Raha mihataka tsy mamoaka votoaty ao amin'ny Facebook sy Twitter ny olona isorohana amin'ny fandikan-dalàna, misy kosa ny mpanao politika sasany mbola misera hatrany ny Twitter. Manohy misera Twitter i Tōru Hashimoto, Ben'ny tanànan'i Osaka izay mitarika ny Antokon'ny Fanavaozana an'i Japana (tsy kandidà amin'ny fifidianana ankapobeny izy). Nataony ho ren-tany aman-danitra ao amin'ny Twitter ny heviny tamin'ny fitsikerana ny Lalam-pifidianam-panjakana. Araka ny twilogn'i Hashimoto, tolotra mitahiry ny sioka, in'60 izy no nisioka tamin'ny 9 Desambra 2012. Ny amin'ny hoe mifanaraka amin'ny lalàna ve ny sioka navoakany sa tsia dia anjaran'ny polisy ny manapa-kevitra amin'izay, hoy Osamu Fujimura, Lehiben'ny Sekretariàm-panjakana.
Mihatra amin'ny olo-tsotra ihany koa ny lalàna. Misy ny mpisera Twitter sasany no nanmpitandrina ity siokan'ilay mpiantsehatra malaza Kenji Tamura, izay tsy kandidà, izay mety ho mandika ny Lalam-pifidianam-panjakana ity, satria heverina ho mampiroborobo antoko manokana izy ity:
Ankehitriny miteny ry zareo fa ny hany antoko mitarika dia ny LDP?! Nifidy DPJ ry zareo satria tsy nahomby ny LDP ary ankehitriny te-hifidy LDP ry zareo satria tsy nahomby ny DPJ? Tsy misy dikany izany teny izany. Adala mihitsy angamba ny olon-dehiben'ity firenena ity. Miangavy ry tanora! Mitsangàna ary fidio ny ho avin'ny zanatsika sy ny zafikelintsika. Tsy avelantsika hifehy ny firenentsika ireo olon-dehibe adala ireo. Mifidiàna ry tanora.
Raha misy ny mitsikera io fanehoan-kevitra io, maro ihany koa ny naneho fanohanana an'i Kenji Tamura. Io fanehoan-kevitra io izao nahazo Fampitan-tsioka [ReTweet] in-3175 ary mpisera 429 no nanamarika azy ho sioka ankafizina.
Naneho hevitra araka izao manaraka izao ny mpisera Twitter juusou13 raha nahita ny vaovao fa tsy namoaka vaovao tamin'ny aterineto [an-tserasera] intsony ny ankamaroan'ny kandidà:
Mieritreritra aho fa mila manana fijery hafa momba ny Lalam-pifidianam-panjakana. Tokony ho ankotrihina hahazoana vaovao bebe kokoa izy io ary tokony hifanaraka amin'ny zavamisy ankehitriny. RT@itmedia_news: Koa satria moa manomboka ny fampielezan-kevitra eny amin'ny Antenimieram-pirenena, nangina tampoka an-tserasera ny kandidà. Nanivana ny fanehoan-keviny tamin'ny ampahany i Nico Nico Douga. http://bit.ly/UD1rSR
Miresaka momba ny fifanoherana hita amin'ny fahanginana ato amin'ny aterineto sy ny tabataban'ny fiara manao dokambarotra eny an'arabe ny mpahay hozatatitra Kenichi Mogi.
Vao nandalo akaiky ahy ny fiaran'ny antoko politika teo. Ny hany reko dia ny anaran'ny antoko dia izay ihany. Tsy ara-tsiantifika ny fiseraserana ny aterineto iadian-kevitra momba ny politika amin'ny antsipirihany nefa raràna ny fanaovana izan mandritra ny fampielezan-kevitra ary ireo fiara ireo ihany no eken'ny Lalam-Pifidianam-Panjakana. Fa miaina amin'ny vanim-potoanan'ny vato ve ity firenena ity sa ahoana e?
Novain'i Keiko Tanaka ny hajian-tsarin'ity lahatsoratra ity, izay avy amin'i Dick Thomas Johnson teo ambany lisansa Creative Commons (CC-By-2.0)
Tantaran'ny Azia Atsinanana farany 24 ora izayJapanaNiteraka fihetseham-bahoaka nanerana ny firenena ny finiavan'i Japana hanavao ny bemidina ara-miaramila
1 andro izayMaleziaNahazo Olona 100.000 Ny Fihaonambe Bersih Maharitra 34 Ora Tao Malayzia Izay Manohitra Ny Kolikolin'ny Governemanta
Fahalalahàna mitenyFifidiananaHafanàm-po nomerikaLalànaMedia sy Fanoratan-gazetyMediam-bahoakaPolitikaTanora